Ikleliswe ngesinwe nangenhloso ebhekele umnotho – Bayede News
Ikleliswe ngesinwe nangenhloso ebhekele umnotho
YIZE luqale njengezinye izinsuku ezejwayelekile,
Posted on 08/07/2019 by Bayede-News
Idolobha iJohannesburg eGauteng. Isithombe: nguBram Janssen
YIZE luqale njengezinye izinsuku ezejwayelekile, uLwesithathu olwedlule belubhekwe ngabovu ngabezindaba nosopolitiki. Kwabezindaba obekumqoka wukushicilela labo abaqokwe njengethimba likaMengameli kule minyaka emihlanu. Bekukukhulu ukuqagela ukuthi ngobani abazodliwa wunkatho. Kosopilitiki nemindeni yabo kakhulu labo abebengoNgqongoqshe kanye namasekela ubuthongo bekungehli. Phela isinqumo besingasho ukuphela kwephalishi uma kuwukuthi uMengameli uRamaphosa useqoke omunye esikhundleni sikangqongqoshe thizeni. Nembala lufikile olungaliwa njengoba iHhovisi likaMengameli lathumela emini ngalelo langa umlayezo wokuthi ngehora lesi-8 kusihlwa uMengameli uRamaphosa uzomemezela ibutho lakhe. Lesi simemezelo sinyakazise abantu nezimakethe nazo ebezimagange ukuthi kazi iyozala nkomoni.
UMnu uThulas Nxesi. Isithombe: nguAshley Vlotman
Yize abaningi baqale ngokudumala njengoba kuthe sebezicwecwele ukuzwa uMengameli ngehora lelo ebelimnyezelwe kuthe lapho sekuqediwe, ukukhuluma kwaba ngokunye. Irandi ebelintengantenga, lisimame cishe ngephesenti eliyingxenye yokukodwa (0.5%). Kuye futhi kwabakhona uzinzo nokuphakama kwezimakethe nasesizindeni iJohannesburg Stock Exchange (JSE). Lokhu kutshengise indlela abatshalimali abashayela ngayo izandla isememezelo sikaRamaphosa phakathi kokunye sokwehlisa isibalo songqongqoshe kusuka kwabangama-36 kuya kwabangama-28 ngesizathu sokuthi ufuna ukuba noHulumeni ongemkhulu ukuze akwazi ukonga imali. Khona lapho bananele ukuthi ukwazile ukugcina oNgqongqoshe abafana noMnu uTito Mboweni eMnyangweni Wezimali noMnu uPravin Gordhan kwEzamabhizinisi KaHulumeni.
Yize kubonakale kwanda isibalo samasekela ongqongqoshe, kulabo abebelindele ukuthi uRamaphosa enze izinguquko ezinqala, kube khona nokho ukuqonda ukuthi bekufanele aqinisekise uzinzo, afake nabantu abasebancane ngokweminyaka, agcine futhi nalabo abebehambisana nezinhlaka ebezingamusekanga ngesikhathi esakhankasela esokuba uMengameli ngesikhathi kuyiwa engqungquthele ye-African National Congress (ANC) yokukhetha ubuholi eNasrec ngowezi-2017. Abuye aqinisekise ukusebenzisana kukanxantathu wamadlelandawonye okuyi-ANC, iCongress of South African Trade Unions (Cosatu) kanye neSouth African Communist Party (SACP).
UMnu u-Ebrahim Patel. Isithombe: eNCA
Khona lapho uMengameli ubuye waba yinoni kwabaningi ngesikhathi ememezela ukuhlanganiswa kweminyango ethize yonke eyelusa ukuthuthukiswa komnotho eNingizimu. Kule minyango kukhona oWezokuthuthukiswa Komnotho kanye noweWezokuhweba Nezezimboni osuzophathwa nguMnu u-Ebrahim Patel wabe eseba nezimpelesi ezimbili okunguMnu uFikile Majola noNks uNomalungelo Gina. UMnyango Wezabasebenzi obuzimele wodwa phambilini nawo wandisiwe kwajotshelelwa ngoWezemisebenzi kwase kuthiwa uMnu uThulas Nxesi akawuhole elekelelwa nguNks uBoitumelo Moloi. UMnyango obukade uzimele obandakanya Wezimbiwa nawo uhlanganiswe noWezamandla, osuzophathwa nguMnu uGwede Mantashe olekelelwa nguNks uBavelile Hlongwa.
UMnu uGwede Mantashe. Isithombe: Business Day
Omunye uMnyango obe noNgqongqoshe omusha yilowo obuphethwe uNks uLindiwe Zulu, okungoWamabhizinisi Amancane okumanje usuphethwe uNks uKhumbudzo Ntshavheni nesekela lakhe uNks uRosemary Capa. Lo Mnyango onikezwe uNgqongqoshe omusha osemncane okubonakala kungathi uzokwazi ukwenza okwakulokhu kulindelekile selokhu waqala. Kukhulu okulindelwe eMnyangweni Wezamabhizinisi Amancane njengoba kwaziwa ukuthi ezweni lonke amabhizinisi amancane aqashe cishe abantu abangamaphesenti angama-60 uma kuqhathaniswa nezimboni ezinkulu. Kamuva izinombolo eziphumile zabantu abangaqashiwe zenyukile zama kumaphesenti angama-27.6 kanti cishe zisema-38% ngokwesigaba esinwetshiwe.
Ngokwezibalo abantu abangaqashiwe kepha bengakwazi ukuqhasheka sebefinyelele cishe ezigidini ezilishumi. Uma kuqhathanisa iNingizimu Afrika namanye amazwe omhlaba cishe asesigabeni esifanayo ngezomnotho, imisebenzi edalwa ngamabhizinisi amancane iyaya kumaphesenti angama- 80 emisebenzi.
Kubonakala sengathi uNks uZulu akakwazanga ukwenza kahle kuwo ngendlela obekulindeleke ngayo. Zingaziningi izizathu ezenze ukuthi angenzi kahle, ngale kokukhwabanisa okubonakale sekuphela unyaka odlule phakathi kwezisebenzi zakhe. Okunye kube ukuthi lo Myango ubumusha futhi wanikezwa izinhlaka ezithile ebezilokhu zikhona ngaphakathi kweminye iMinyango ezifana neSEDA, yi-Incentive Schemes nezinye. Phakathi kokunye lo Mnyango ubulokhu unxenxa eminye ukuthi isebenzisane nawo ngenxa yesiqubulo sawo sokuthi “Wonke uMnyango unenhlese yokukwazi ukusiza amabhizinisi amancane”.
Esigabeni sesibili selokhu wasungulwa, uma kumele ubenegalelo elilindelekile lo Mnyango kumele uhlinzekwe ngemali yawo ngqo futhi unikezwe isikalo sokuthi mangaki amabhizinisi okumele uwaqambe. Kumele futhi usize amabhizinisi asevele esebenza ngesizathu sokuthi uwakhulise ukuze aqashe abantu abaningi. Ukuhlanganiswa koMnyango Wezabasebenzi noWemisebenzi kubonakala kungaletha umehluko uma oNgqongoshe abayengamele bezokwazi ukusebenzisana. Lo Mnyango kuyomele ukwazi ukubheka isigaba sawo sesibili esithi ‘nemisebenzi’.
INingizimu Afrika ngonyaka odlule ilahlekelwe cishe imisebenzi engaphezu kwezi-200 000 ngakolunye uhlangothi uHulumeni kaRamaphosa wona ufisa ukwakha imisebenzi eyizi-250 000 ngonyaka. Izinsongo zezezimboni zisaqhubeka ekutheni kusazolahleka eminye imisebenzi cishe engaphezu kwezi-300 000 ezimayini nasemabhange.
Lokhu kuyiva elinsonsotha kakhulu enyameni. Kuzomele lo Mnyango usebenze kanzima ekusebenzisaneni nezimboni, izinyunyana nosomabhizinisi ekwakhiweni kwamabhizinisi azokhiqiza imisebenzi edingekalayo kulesi sikhathi.
Umqondo okumele leli thimba elisha lize nawo ohambisana nesikhathi esikuso lapho kucace bha ukuthi ukushaya ngezinduku zakudala ekwakheni amathuba emisebenzi sekuphelelwe yisikhathi. UGuquko Lwezinga Lesine Lwezimboni (4th Industrial Revolution [4IR]) noBuchwepheshe Bokuzilawula Bamakhompyutha (Artificial Intelligence [AI]) yikhona okumele kuqhube lo Mnyango ukuze ukwazi ukwenza abantu baseNingizimu Afrika bakwazi ukuncintisana namanye amanzwe omhlaba kulezi zigaba zezentuthuko. Ukulahleka kwamanye amathuba emisebenzi akudalwa nje ukwehluleka kukaHulumeni ukuwakha, kepha kudalwa nawumthelela walezi zinto.
UNgqongqoshe uPatel ubukeka engeke esaba nalo ihawu lovuzivikela ekutheni akanawo amandla aqonde ngqo ekukwazini ukufukula amabhizinisi, ikakhulukazi aboHlanga. Ngaphambilini uMnyango wakhe yiwo obuphethe izizinda zokutshalwa kwemali ezifana ne-Industrial Development Corporation (IDC), iNational Empowerment Fund (NEF) nezinye ekubeni yena ebengumuntu osebenza ukwakha imigomo kuphela. Eminye yemigomo eyamakhela udumo yiNew Growth Path (NGP), neyezokulawulwa kokuncintisana kwezinkampani. Lo mgomo neminye ibiyenza lo Mnyango uthi noma uletha isethulo esihambisana nokuthi ungakhiwa kanjani umnotho, uvese ukutshele ngokuthi uwuMnyango wemigomo kuphela, kunalokho ukufuqele kulezi zizindamali kuphele kanjalo. Njengoba eseyiphethe yomibili, kuzomele kwakhekhe uhlelo olunqala lokusebenzisa amandla asephindwe kabili anawo ukwakha isimo esizozinzisa ezomnotho hhayi kuphela kulaba abadla izambane likapondo, njengoba kwaziwa ukuthi yibo abahlomula ngokweqile emalini ekhishwa njengezibonelelo eya ezimbonini ukuze zincengwe ukuhlala eNingizimu Afrika zakhe umnotho. Kufuneka ibonakale le mali. Makabuye enze izinhlelo ezifana nalezo ezabekwa njengeBlack Industrialist Programme (BIP) ziphile kunalokhu obekubonakala.
Ezezimbiwa neZamandla kumele zibonakale zakha izinhlelo ezicacile mayelana nokungena kwaboHlanga kulo mkhakha. Ukucima kukagesi obekubonakala nokwakhiwa kwamasu amasha ikakhulu kuhlelongqangi lokunwenisa amasu okuletha ugesi ahambisana nokongiwa kwemvelo kumele acace futhi angakhinyabezi iNingizimu Afrika ekuthuthukiseni umnotho.
Ukuqhubeka nokunyuswa kukagesi kuyisikhinyabezo esikhulu ekuthuthukisweni kwezimboni. INingizimu Afrika kwakufanele iqinisekise ukuthi igcina amanani entengo kagesi ephansi, lokhu okwakuzokwazi ukwenza ukuthi ibe yizwe eliheha osozimboni bamazwe omhlaba ngoba bebona ukuthi ukukhiqiza eNingizimu Afrika kwenziwa ngentengo ephansi kunamanye amazwe.
UMengameli wezwe kubonakala sengathi uzimisele kakhulu ukusimamisa isimo esinozinzo ezweni, okubonakala sesiphendule izwe langaba nozinzo ikakhulu kubantu abasha nakubantu abangawutholi umsebenzi.
Ingabe iphupho likaRamaphosa lokudala amathuba amaningi emisebenzi lizofezeka noma kuyogcina ngokuphushwa?
Posted in Inkundla Yabantu